Xukuumada Somaliya oo Jawaab dabacsan ka bixisey Go,aankii Dowlada Kenya ku xanibtay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd May 2019 049
War-qoraal oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee DFS ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay Go’aankii ay Dowladda Kenya dhawaan ku xadiday Dal-ku-galka la siiyo xubnaha ka tirsan Xukuumadda iyo Golayaasha Barlamaanka Federalka Somalia.
Qoraalka waxaa lagu muujiyey inay DFS si aad ah uga walaacsan tahay xubnihii ka socday DFS ee dhawaan lagu xanibay Garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi, waxana farta lagu fiiqay inay Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka Kenya ka dambeeyeen xanibaadaasi iyo inay xubnahaasi dib loogu soo celiyo Muqdisho.
Hadalka qoraalka ee ay Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee DFS soo saartay waxaa kaloo lagu muujiyey walaaca laga qabo in Rakaabka ka dhoofa Somalia lagu khasbay inay sii maraan magaalladda Wajeer, si loogu sameeyo baaritaano dheeri ah, ka hor intaysan u sii gudbin Garoonka Nairobi.
Tallabadaasi ayaa lagu tilmaamay inay carqalad ku tahay Xiriirka Walaaltinimo ee Somalia iyo Kenya, waxaana dowladda Kenya loogu baaqay inay xeeriso carqaladaha ay keeni karto arrintaasi, lana tixgeliyo Dabciga Diplomaasiyadda iyo Ixtiraamka ay labada dal kala mudan yihiin.
Ugu dambeyntii, Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee DFS waxaa lagu muujiyey inay DFS dhankeeda ka go’an tahay Ilaalinta Xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal, isla markaana ay sii wadi doonto Muwaadiniinta iyo Saraakiisha Dowladda Kenya ee booqashadda ku imaanaya Somalia.
Madaxda Maamulada Galmudug iyo Puntland oo Galkacyo ku kulmay.
Dhagayso+Sawiro:- Madaxweynaha Puntland oo Kismaayo Kaga qayb Galay Bandhig Faneed Calaami ah
Daawo: Shir Culus oo Ammaanka looga hadlaayo oo muqdisho lagu qabtay iyo Ra’isul wasaare kheyre oo….